Zimbabwe: $ 3,5 bhiriyoni yakabhadharwa kuvarungu vachena semubhadharo wepasi - teles
Harare ichabvisa mabvumirano enguva refu uye nekubatana vanopa kune dzimwe nyika varimi uye varimi kuti vawane mari.
Zimbabwe neChitatu yakabvumirana kubhadhara madhora mazana matatu ezviuru zvemadhora mukubhadhara varimi vechichena avo minda yakadzingwa nehurumende kuti vatore mhuri dzevatema, nhanho imwe padyo kugadzirisa danho rimwe rakakomba pasi rose. nyonganiso yenguva yaRobert Mugabe.
Asi nyika ye Africa yekumaodzanyemba haina mari uye ichaburitsa ma bond notes kwenguva refu uye nekubatana vanopa kune dzimwe nyika varimi kuti vawane mari, sekuenderana chibvumirano chemubhadharo.
Makumi maviri apfuura, hurumende yaVaMugabe dzimwe nguva yaidzinga varimi vechichena zviuru zvina nemazana mana uye yakagoverwa minda kune mazana matatu ezviuru vevanhu vatema, ichiti yaive ichiruramisa kusaenzana kwemakoloni.
Chibvumirano chakasainwa pamahofisi emutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, State House muguta guru reHarare chakaratidza kuti varimi vachena vachabhadharwa mari yezvivakwa zvemapurazi kwete epasi pacharo, zvichienderana nebumbiro remutemo wenyika.
VaMnangagwa vakati chibvumirano cheChitatu "chakaitika nenzira dzakawanda."
"Izvi zvinounza kuvharwa uye kutanga patsva munhoroondo yekutaura kwepasi muZimbabwe," VaMnangagwa vakadaro.
"Matanho akatisvitsa pachiitiko ichi ane nhoroondo zvekare sekusimbisa zvakare kusagadziriswa kwenzvimbo uye chiratidzo chekuzvipira kwedu mukubvumirana, kuremekedza mutemo nematare. yezvivakwa, "akadaro.
Gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, vakati pamusangano wekusaina: "Muchiitiko ichi, takazvipa isu gumi nemaviri mwedzi yekufamba nyika, kutenderera Zimbabwe, kufunga nezvenzira dzekuwana mari idzi." Isu takatsunga kuti zviitike. Izvo zvakare nezvezvibvumirano, kwete zvakanyanya zvekuisa mari patafura. Inyaya yekuzvipira. "
Ruzivo rwekuti murimi mumwe nemumwe kana vazukuru vake, vapihwa nguva yacho kubva pakawanikwa mapurazi, vangangowana mukana asi zvakadaro hurumende yakati ichazotungamira vanhu vakuru kana zvekuvakwa kwedzimba.
Fodya muZimbabwe: Musiki mukuru anogadzira mari yekudyidzana yekune dzimwe nyika inokanganiswa neCOVID-19 (2:00)
Varimi vaizogashira makumi mashanu muzana emubhadharo mushure megore rimwe uye vamwe mukati memakore mashanu.
VaNcube negurukota rinowona nezvekurima, Muzvare Oppah Muchinguri-Kashiri, vakasaina hurumende.
"Sevanhu vemuZimbabwe, tasarudza kugadzirisa dambudziko iri rakareba," akadaro Andrew Pascoe, mutungamiri weCommerce Farmers Union anomiririra varimi vachena.
Kubata ivhu yaive imwe yesarudzo dzaVaMugabe dzakasanganisa hukama neWest. VaMugabe, avo vakadzingwa musarudzo dzemuna 2017 uye vakafa gore rapfuura, vakapomera vanhu vekumadokero mhosva yekupa hurumende yavo zvirango.
Chirongwa ichi chichakamurawo pfungwa yeruzhinji muZimbabwe, sevanopikisa vachiona senzira yekudyidzana yakasiya nyika ichinetseka kuzvidyisa. Asi vatevedzeri vake vanoti vakapa simba vatema vasina nzvimbo.
VaMnangagwa vakati kugadzirisa ivhu hakugone kudzoserwa kumashure, asi mubhadharo wekubhadharwa wakakosha kuti patsvage hukama neWest.
Zimbabwe yakaunza shanduko yeminda yakagadziriswa muna 2000 apo vatevedzeri vebato riri kutonga reZANU-PF nevasori vehondo yerusununguko ye1970s vakatora nzvimbo huru dzemapurazi.
VaMugabe vakaruramisa kutora nzvimbo senzira yekururamisa nhoroondo dzakaipa nekutora nzvimbo yakatorwa nechisimba kubva kune vanhu vatema vemunyika.
Vatsoropodzi vanopomera VaMugabe chirongwa chekuparadza nyika zvakanyanya mune zvekurima - hunyanzvi hwehupfumi. Kubuda kwehupfumi kwakadonha nehafu nekuda kwekubatwa kwevhu uye hupfumi hwave kuchikanganiswa kubva ipapo.
Aya maboniboni Enchard nyika Makore mashoma apfuura, izvi ndizvo zvavakaita senge ikozvino
iyo yechitatu yekurayirwa kweAlassane Ouattara inokonzera kuvhunduka pakati peMayway neDoumbia ...